We.com.mm - အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမားရဲ့ သမက်လောင်းလေးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမားရဲ့ သမက်လောင်းလေးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့လွယ်ကူလှတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး …။
ဘာလို့မလွယ်ကူသလဲသိလား ..။ အရှင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ ခင်ဗျားကို တစ်ကိုယ်လုံးရှိသမျှအဝတ်တွေချွတ်ထားပြီး လူသွားလူလာများလွန်းတဲ့ လှည်းတန်းလို၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်လိုနေရာမျိုးကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းထားသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘယ်သွားသွား စူးစမ်းတဲ့မျက်လုံးတွေ နဲ့ စူးရှတဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာ အနေရခက်နေမှာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုဘဝမျိုးထဲကိုမှ ခြေစုံပစ်ပြီးဝင်လာမယ့်သူတစ်ယောက်တော့ရှိနေတယ်။ အဲဒါကတော့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမား ရဲ့ သမီးကြီး မယ်လီယာ အိုဘားမား ရဲ့ ချစ်သူ ရိုရေ ဖာကူဟာဆန် ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါပဲ။
မယ်လီယာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စတက်တဲ့ ၂၀၁၇ ဆောင်းဦးကာလမှာ သူတို့တွေစတင်လက်တွဲခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မယ်လီယာ နဲ့ ရိုရီ တို့ဟာ အခုမှသိကြတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ အထက်တန်းကျောင်းကပွဲတွေ၊ အမ်စတာဒမ်က ပါတီပွဲတွေမှာ မကြာခဏဆုံခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဘယ်အချိန်တည်းက ချစ်သူဖြစ်နေခဲ့လည်းမသိသော်ငြား လူမြင်ကွင်းအတိအလင်းထွက်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူတို့စုံတွဲကို နယူးယော့ခ်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေ၊ ရှော့ပင်းမောတွေ၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ မကြာခဏမြင်ရတာများလာတဲ့အခါမှာတော့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီ လို့ အားလုံးကတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုလိုက်ကြတယ်။
အရပ်ခြောက်ပေကျော်ရှည်ပြီး တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်လူချောတစ်ယောက်၊ အင်္ဂလန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲကပဲလို့ သိထားတဲ့ ရိုရီ ဖာကူဟာဆန် ကိုမစ္စတာအိုဘားမားအနေနဲ့ သမက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ ငြင်းဆန်နိုင်မလား …။
ဒါမှမဟုတ် မယ်လီယာ နဲ့ ရိုရီ တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုပဲ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေနဲ့ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွေထက်မှာမြင်ရမလား …။ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ …။
Rum နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး(၅) ချက်
7 months ago by Zen J'Fry
2 days ago by Gabriel
1 years ago by Linn Khant